Olona am-polony izay nitam-basy no nanafika ny tokantranon’ireto mpivady ireto. Voatifitra tamin’izany ny raim-pianakaviana izay havan’izy roa ary koa ny mompera iray. Mbola afaka nandefa hafatra tamin’ny facebook izy roa nandritry ny fanafihana ary ny olona izay nahita no nampandre ny mpitandro ny filaminana. Saingy efa tsy nisy na inona na inona hita intsony.
Voatery nandray fepetra ny mpiandry fonja ao Toamasina ary nanome sakafo manta ireo asiatika (sinoa sy thailandais) miisa 15 izay nigadra ao ka nanao fitokonana noho ny tsy fahampian’ny sakafo omena azy ireo. Raha tsiahivina dia ny fonja eto amintsika no isan’ny tena tsikerain’ny mpiaro ny zon’olombelona indrindra satria tsy manara-penitra sy tsy ampy sakafo ho an’ny gadra. Etsy andanin’izany,naneno hoazy ny sambo Flying izay nipetraka fotsiny tao amin’ny seranana ary voatery navoaka hainganany komandàn’ny sambo sy ny teknisiana iray mba nanamboatra izany.
Tsy fantatra intsony ny tena andraikitry ny mpitandro ny filaminana eto amintsika sy ny fari-piadidian’izy ireo avy. Nahagaga ny maro ny nahita ny minisitry ny fiarovam-pirenena teny amin’ny faritra iva teto an-drenivohitra ary nitondra kômandô mba hanao fisafoana ny elakelan-trano sy ny faritra mena. Tsy misy maharatsy izany saingy kosa tsy tokony ho andraikitry ny polisy ve ny fampandriam-pahalemana ety an-drenivohitra. Na izany aza anefa mety mba hanatsara zavatra ihany ny fampiasàna ny miaramila hanampy azy ireo.
Hanaiky ny hiala eny Ambanin’Ampamarinana sy Tsimialonjafy ihany ireo mponina terena hiala eny an-toerana raha toa ka misy ny fifiampiresahana mazava, hoy izy ireo . Tsy mbola nisy mantsy ny fanazavana tsara avy amin’ny teknisianina sy ny Bngrc momba ny antony hilazàna fa tena tsy mety intsony ny fipetrahana eny. Mihinzingizina ireo mponina fa tsy ny toerana rehetr ano hatahorana hirotsaka fa kosa ny faritra sasantsasany ihany. Tsy tokon hisy arak’izany ny fanerena hiala.
NAHAZO ALALANA HANORINA TRANO
Nahazo alalana hanaovana fanorenana avokoa ireo trano eny Ambanin’Ampamarinana hoy ny delegen’ny boriborin-tany fahefatra ary mandoa hetra ara-dalàna raha ny fanazavany . Faritra tsy tokony anorenana anefa eny amin’ity faritra ity raha ny tantara no zohina saingy tsy nanakana ireo mponina hanangana teny izany hatramin’ny fanjanahan-tany . Sarotra arak’izany ny hanalàna ireo mponina saingy mila mametraka fifanarahana mazava ny fitondram-panjakana momba ny fepetra rehetra hamindrana ireo mponina
LAFINY SOSIALY MIKORONTANA
Tsy misy mandeha amin’ny laoniny intsony ny fitantanana ny sosialin’ny vahoaka hoy ny filoha nasionalin’ny Hafari malagasy Jean Nirina Rafanomezantsoa manoloana ny fisian’ilay ranobe rehefa avy ny orana. Tsy nisy mihitsy ny fitohizan’ny fitantanan-draharaham-panjakana isaky ny misolo ny fitondrana hoy izy. Nanakiana mafy ny vahoaka ihany koa noho ny tsy fandraisan’andraikitra sy ny fikojàna ny fotodrafitr’asa ny Hafari malagasy ka izao lasa samy mizaka ny vokany.
TSY FOTOANA HANAPOAHANA VATO
Tsy fotoana tokony hanapoahana vato izao vanimpotoanan’ny fahavaratra izao ary mainka koa hatahorana hampisy fiantraikany ratsy hoy ny lehiben’ny fokontany eny Tsimialonjafy. Nanamafy ireo mponina fa mila mitady vahaolana hafa ny Bngrc fa tsy ny fanapoahana io vato io no mainka koa hanitatra ny olana sy hampirodana. Tsy mety amin’izy ireo ny hipetraka lavitra ny renivohitra araka ny vahaolana efa nomen’ny mpitondra azy ireo.